Zụta CDP choline ntụ ntụ (987-78-0) hplc≥98% | Ndị na-eweta AASraw
/ ngwaahịa / Nootropics ntụ ntụ / CDP choline ntụ ntụ
Rating: SKU: 987-78-0. Category: Nootropics ntụ ntụ
AASraw dị na njikọ na mmepụta ikike site na gram ka usoro nchịkọta nke CDP choline ntụ ntụ (987-78-0), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
CDP choline uzuzu uzuzu
CDP choline ntụ ntụ bụ isi Characters
aha: CDP choline ntụ ntụ
Usoro Molecular: C14H26N4O11P2
Molekụla arọ: 488.32
CDP choline ntụ ntụ iji mee ka ụbụrụ rụọ ọrụ na mmụba ọzọ
Aha: CDP choline ntụ ntụ, citicholine, Neurocoline
CDP choline ntụ ntụ eji
A na-edozi ndozi a iji gbochie ma ọ bụ na-emeso nsogbu mberede nke ebe nchekwa nke metụtara ịka nká n'ihi eziokwu ahụ bụ na mkpụrụokwu abụọ ọ na-ekwupụta bụ ndị na-adịghị edozi ma nwee ike ịmalite ịmụ ihe. Ọ bụ ezie na o yiri ka ọ dị irè karịa phosphatidylcholine (PC) na ọrụ a, n'akụkụ ụfọdụ site na ịmalite ịbịakwute PC na ụbụrụ, ike ya dịka nke Alpha-GPC.
CDP-choline nwere ihe ozo nwere ike iji mee ihe banyere cognition. A na-ejikarị ya eme ihe dị ka onye na-eme ka nchekwa dị na nwata, ma n'agbanyeghị ụfọdụ ihe ngosi ndị na-egosi na nke a ga-ekwe omume na CDP-choline ọnụ, ọ dịghị ọmụmụ ihe ụmụ mmadụ n'oge a. Otu nchọpụta achọpụtawo na mmụba nke CDP-choline (nke dị mkpa ka a gbanwee), CDP-choline nwere ike ịnwe ọrụ dịka ihe na-egbochi mmadụ ịṅụ ọgwụ ọjọọ na cocaine na (ihe àmà nke mbụ na-egosi) nri.
Ebe ọ bụ na CDP choline dị mma nke ọma, a na-edepụta ọtụtụ usoro dị iche iche n'enweghị ọdịdị dị ịrịba ama. A na-atụle usoro ọgwụgwọ kwa ụbọchị site na 250 ruo 1000 mg, ma ọ bụ na otu dose ma ọ bụ na 8 doses abụọ na 12 awa dị iche iche, na-eche na ọ dị mma ma dị irè.
N'ụzọ na-adọrọ mmasị, nchọpụta MIT na-egosi na mmetụta dị na 4000 mg abụghị ihe dị iche na nke ntinye 2000 mg, nke yiri ka ọ na-egosi na ọ dịghị ntakịrị uru ị ga-esi na-ewere nnukwu doses.
CDP choline dị na ma capsule na ntụ ntụ. Ọ bụ mmiri soluble, nakwa dị ka 95% nke ọgwụ ọnụ na-etinye uche gị n'ahụ.
Ịdọ aka ná ntị na CDP choline ntụ ntụ
Nnwale na ọmụmụ ihe na-egosi na CDP choline adịghị edepụta mmetụta dị oke njọ, ọbụna na akwa doses. Nnyocha nyocha na-egosi na o nweghị mmetụta dị oke njọ na usoro cholinergic na a na-egbochi ya kpamkpam, àgwà ndị na-eme ka ọ dabara maka ọgwụgwọ ọrịa, ọnyá, na nsogbu dị iche iche.
Enweghi ike ịkọ ọrịa, isi ọwụwa, ehighi ụra nke ọma, na afọ ọsịsa dịka o nwere ike ime. Enweghị nnyocha gbasara mmetụta ndị inyom dị ime ka agwụla, ya mere a gwara ndị nwere ime ma ọ bụ na-enye nwa ara ka ha ghara iji CPD choline.
CDP choline bụ ihe dị mma na mgbakwunye na usoro nchịkọta onye ọrụ ọ bụla nootropic. Na ya n'onwe ya, ọ bụ ihe nkwadoro emetụtakwara nke ọma, mara amara ka ọ dị mma ma gbochie ya ka ọ ghara ichefu oge ịka nká, ọrịa, na mmerụ ahụ.
Ọ na-enye ike ọgụgụ isi, na-elekwasị anya karị, na nghọta doro anya. N'ijikọta na nootropics ndị ọzọ ọ bụ onye nwere ike dị ike, mgbe ọ na-ejikwa racetams eme ihe karịsịa ọ na-emepụta mmetụta synergistic nke na-eme ka mmụba nke uche dị n 'ọkwa nke na-enweghị mmeju nwere ike iru na-enweghị nke ọzọ.
E gosipụtara na CDP choline nke ọma nke ọma ma na-amụ ya ruo ọtụtụ iri afọ, ọ bụ ezie na akwa doses adịghị mkpa iji nweta nsonaazụ kacha mma. Enweghi ihe edeputara ihe ndi siri ike ma kwadoro maka ogwugwu na Europe ma Japan.
CDP choline bụ ọnụahịa dị mfe, ngwa ngwa dị mfe nke na-esote ndị na-esoghị na ndị na-eso ụzọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ị nweta ihe kachasị na nchịkwa gị, CDP choline bụ ebe a na-akpọ choline.
(1) Ndi CDP choline uzuzu oru?
A na-atụgharị CDP Choline n'ime Choline na cytidine n'ime eriri afọ, mgbe ha gafesịrị mgbọrọgwụ Blood-Brain, a na-agbanweghachi ya na CDP Choline ebe a na-eji ya ma tinye ya site na ndị natara Acetylcholine nke a na-etinye na echiche na nchịkwa. Achọpụta nchebe neuro nke CDP Choline nwere ike ime site n'ichebe ma Cardiolipin na Sphingomyelin. Ụzọ ọzọ a tụrụ atụ maka ime ihe bụ ihe ntinye nke nchịkọta glutathione. CDP Choline na-enye aka mee ka ọtụtụ ndị natara dị ka acetylcholine, norepinephrine, na dopamine.
A ka nwere ọtụtụ mgbanwe dị iche iche ọ bụ ezie na a ghaghị elele anya na imeziwanye ikike uche. N'ihi ya, ọ na-esi ike ịchọta kpọmkwem otú CDP Choline ga-esi dị irè maka otu onye. Ihe niile na-adabere na mkpa nke onwe ha na ikike ime ihe ugbu a tinyere nhọrọ ndụ.
(2) AHỤRỤ NA EBE
CDP choline bụ ngwongwo na-enweghị ike nke na-enwe ihe ndị ọzọ nootropics na-arụ ọrụ n'onwe ya iji welie ọtụtụ akụkụ nke cognition na ụbụrụ ike:
• Nwelite nchekwa: CDP Choline nwere ike mara amara maka ikike ya iji melite ebe nchekwa ma gbochie ọnwụ nchekwa. A na-ejikọta ya na mgbochi ịka nká ma a mụọ ya dịka ọgwụgwọ nwere ike ịgwọ ọrịa Alzheimer.
• Enwekwu ikike iche echiche: Ịnọgide na-enwe ume ike echiche dị mkpa maka onye ọ bụla, site na ụmụ akwụkwọ na-eche ule na ndị okenye na-ata ahụhụ site na ụbụrụ uche na-ejikarị ịka nká. Ọnwụnwa ahụike gosipụtara na CDP Choline nwere mmetụta bara uru dị ukwuu na ike iche echiche, na-arịwanye elu na-emepụta ihe na-emepụta ọgwụ na-emechi anya ma na-eme ka ọ ghara ịka nká.
• Imeziwanye Mma na Nchebara echiche: CDP choline nwere ike ime ka ikike itinye uche maka oge dị ogologo na enweghị nkwụsịtụ, ihe dị mkpa maka ịmụ ihe, ịmụta nkà ọhụrụ, ma ọ bụ ịmecha ọrụ ọ bụla dị mgbagwoju anya na nke uche. Nnyocha na-egosi na nke a bụ eziokwu ọbụlagodi na ọnọdụ siri ike gụnyere ọrịa strok, mmerụ ụbụrụ, na ọrịa Alzheimer.
• Ịmepụta na Amplifying Ndị ọzọ Nootropics: Ọtụtụ ndị ọrụ na-enweghị atụ na-atụle CDP choline a must-have when constructing any stack or combination of supplements. Ebe a choputara, ọ na-arụ ọrụ nke ọma na racetam class nootropics, na-eme ka mmetụta ha dị ike ma n'otu oge ahụ igbochi obere isi ọwụwa nke a na-ejikarị racetams mgbe ụfọdụ. E gosipụtara na ọ ga-egbu oge ịmalite ịda mbà n'obi na ọrịa Alzheimer mgbe ejiri ya na piracetam.
CDP choline ụkọ ntụpọ
CDP choline Ntụziaka ntụziaka ntụpọ
CDP choline ntụpụ ahịa
Otu esi zụta CDP choline ntụ ntụ si AASraw